Phezulu 'Ii-80 zeengoma ezivela kwiProjekti yangaphandle / i-Supergroup Mike + yeMichanic
Iingcamango zenkqubela phambili / i- rock rock band I- Genesis ngexesha le-80s ayisoloko ivelisa into enomdla, kodwa akukho nto inokungabaza ngayo imizamo yokubhala ingoma yamalungu amabini amabini (uMike Rutherford noPhil Collins) bakhiqize iingoma ezingalibalekiyo lexesha. Ingaba kumculo weGenesis, umsebenzi we-solo kaClins, okanye uRutherford wesigqoko seMike + seMikikiki, lo mculo wawungenasisiseko kodwa ugcwele iingoma ezinamandla kunye nobuhle bomculo. Ukusebenzisa izakhono zeemvumi ezixhasayo uPaul Carrack kunye noPaul Young kule nqela yokugqibela, uRutherford wasebenzisa igama lakhe ngokuthi ngu-showcase ngenxa yengoma yakhe yokubhala. Nanku ukhangelelo lweziganeko kumculo ogqwesileyo uMike + woMatshini we-'80s, oqulunqwe kwiiqela ezimbini ezibiniweyo ezirekhodiweyo ezivela kwisiqingatha seshumi elishumi.
"Ukuqhuma okuSilungileyo (kwiNdawo engozini)"
Bob King / Redferns / Getty Izithombe
Lo mkhondo wecala lokukhumbuza, okhohlakeleyo ophakathi phakathi kweemposi wamathambo wazisa umhlaba kuMike + oMatshini, iqela lakhokelwa nguRutherford ngokungathandabuzeki kodwa lathandwa kakhulu ngamanye amalungu amane aphumelele. Ngokukodwa, amazwi kaCarrack okhokelayo apha ayenayo ininzi yeemvakalelo ezibangelwa yintlungu, ukucinezelwa nokuguqulwa kwezinto ezingenakubizwa ngegama elingenagama. URutherford kunye nomlingani weengoma, BA Robertson, bazibonakalisa abangaphezu kokukwazi ukudala umoya ophazamisayo kunye nemvakalelo yokumangalela. Njengomzila wokukhokela kunye nomnye ongasemva kwiqela lokuqala lika-1985 elizimeleyo, ingoma yaba yintsika ye-Top 10 yomsakazo we-pop ngexesha lokuwa kwelo xesha. Ngaloo ndlela, ngokuqinisekileyo yayibanjwe njengenye yeengcamango eziphambili kunye neengqungquthela eziphambili ze-pop / rock in the middle of 80s.
"Yonke into endiyidingayo iyimangalisa"
I-Cover Cover I-albhamu ye-Atlantic / WEA
Ngokuphambene nokugqithisileyo kwaso, lo mlandelelunye unikezela i-hop engalindelekanga, weqa kunye nesigxina se-jaunty kubaphulaphuli ngexesha lobusika ka-1986. Nangona ibonisa intsikelelo yentliziyo kunye nokuzisola, ithemba elikhulu likaRutherford lithatha isifundo kunye -kufuneka ukukhula kufumaneke ukuhlaziya kwaye ngandlela-thile kuqiniseke ngokuqinisekileyo. Uninzi lwale mpu melelo ngokuqinisekileyo luboleka ekusebenziseni ukunyuka komlomo kukaPaul Young, wakha waba nomculi we-rock ye-unsung ye-Sad Cafe. Nangona mhlawumbi ixhomekeke kwiibhodi zebhodi kunye nesilungiselelo somculo (inqaku elithile) elungiselelwe umculo, oku kungumculo ophezulu ophezulu. Inyaniso yokuba kungenakuzenzekela ukuba unxibelelwano lwangempela kunye nabaphulaphuli luyinto engqinelanayo kwizakhono zomqambi uRutherford kunye nomlingani wakhe oqhubekayo wengoma / umlimi kule ngxelo - uChristopher Neil.
Ngaphandle kokusebenza ngokungahambisani nomsebenzi we-Billboard's pop charts, elaliqulethe ukungena emfutshane kwiindawo eziphezulu ze-Top 40, eli li-ballad elikhulu linye yeengoma ezigqwesileyo zokuthanda umculo ezivela ehlobo lika-1986. Kwakhona kwakhona, u-Young unikeza ukunyaniseka nokunyaniseka kwingoma yokubamba. Okubaluleke ngakumbi, uRutherford ubonisa ukuba unako-ozimeleyo weGenesis no-Collins-ukukhangela idwala elikhunjulwa lixesha elide elikhumbulekayo elikhokelela ekuthembekeni kweso sihlandlo esicatshulweyo. Yonke into emithathu yamanqaku amnandi avela kwiqela lokuqala libonisa amaqhekeza angama-hook aphezulu, kodwa kuninzi eninzi emva kwe-candy ear ear eary ephakama kwangoko. URutherford noNeil baphinde baphinde babambisane ngokufanelekileyo ngombono wezingoma eziqinileyo, njengoko iingoma zengoma ezibuhlungu zisebenza kakuhle kunye zombini kunye nomlingane kulo bhuloli lokubulala: "Yaye xa uphuma isandla sam, andiyikholwa ... "Inomdla kwaye inhle.
Enye i-balladbhodi eqhutywe ngebhodi yebhodi ekhunjulwayo ivela kwiqela elimangalisayo le-band - ngendlela echaphazela umkhondo we-albhamu. Nangona kunjalo, ngeli xesha azinyathelo ezahlukileyo zezakhono zokunika enye into enyanzelisayo. Umculi we-Journeyman uJohn Kirby ubambelela ngokukhawuleza apha amazwi, achukumisa kwi-Rutherford umnqweno wokwenza umsebenzi wakhe omtsha kwiindawo eziphathekayo eziphathekayo. Ekugqibeleni, le ngoma yayiza kufumana indawo efanelekayo kwiqonga le-80s yomdlalo we-cop, kunye neengqungquthela zayo ezinokunyamezela ngokuqinisekileyo zenza ingqiqo enkulu kuloo mongo. Nangona kunjalo, ubambiswano obubalulekileyo bukaRutherford noNeil buya kuphinda lube nesiteji esiphambili kwakhona, njengokuba lowo owayedlulile uye wabonisa ukuba lo mva wokuthatha le ngoma ethile kwisalathiso sawo esincinci.
Nangona umncinci wancinci ngokwabo, olu luchotho olusuka kwiqela le-1988 LP - - lunezinye iinkqubo ezihamba phambili ezisuka kwi-Young. Ingoma mhlawumbi ixhomekeke ekubambeni kwayo xa i-chorus imbalwa kakhulu, kodwa impawu zebhodi yeefestile ngokuqinisekileyo zifikelela ngokuphumelelayo kwiRenesford yaseGenesis yangaphambili. Kukho nawuphi na umgangatho, ubhaliso olubhaliweyo nguRutherford kunye nombambisene wangaphambili uRoberts-ngokuqinisekileyo wayefanelwe ngcono kunomxholo weNombolo 63 kwi-charts Billboard pops ngasekupheleni kowe-1988. Ingumzamo omncinane kuMike + ikhathalogu yoMatshini, ngokuqinisekileyo, kodwa ngokuqinisekileyo oko akuthethi ukuba ayinalo iincwadana ngokupheleleyo.
Nangona ukutshintsha amashadi ehlabathini lonke ebusika ngo-1989, le ngoma mhlawumbi ingatshintshi umsebenzi kaMike + oMatshini ukuba ibonwa njengengoma yesignesha yecandelo. Ewe, ngokuqinisekileyo kukho ezinye iipathos ezilukhuni apha, kwaye i-tune ayikwazi ukutyholwa ukuba yinto engaphantsi kwayo. Nangona kunjalo, umxholo "wokuphila-namhlanje-umxholo" owenziwe kubudlelwane kunye nezihlobo eziseduze mhlawumbi awufanelekanga njengenqobo. Ekugqibeleni, nangona uqeqesho olusemgangathweni, u-Carrack osebenza ngokuphefumulayo akakwazi ukugcina umzila ukusuka kwezinye iindawo ezinqamlekileyo kunye neendawo eziqhelekileyo. Umyalezo uyilungileyo kwaye isilumko, ukuba uqiniseke, kodwa le ngxaki eyaziwayo ayifinyelele naphi na kwindawo ephakamileyo ye-"Silent Running" okanye "Into Endiyifunayo Yimangalisa." Sekunjalo, kufuneka kubekho indawo kuyo nayiphi na uluhlu olungundoqo lukaMike + loMatshini.
I-Top Spandau Ballet I-Top Hits kwi-'80s
Top Pat Benatar Iingoma zama-1980s
I-Bonnie Tyler Solo Iingoma zee-80s
Iintetho zeNtetho eziPhambili zee-80s
Phezulu i-Squeeze Songs of '80s
Iintombi zeMariya kunye neMimangaliso e-Assiut, eYiputa
Ukubhiyozelwa kweFebruwari yamaPhilile aseFransi ('Jour des crêpes')
Funda iSisiseko seNkcukacha ekukhuseleni i-Database Access yakho ye-2007
Ndiyixabisule! Ukusebenzisa iGustar ngeSpanish
Tungsten okanye i-Wolfram Facts
Izifundo zesiNgesi ezisisiseko - Izifundo ezibalulekileyo zokuQala abafundi beNgesi
ILebhu yeLwimi yoLwazi lweLwimi
I-Admissions yeNyuvesi yaseNyakatho-ntshona
Umntu wePiano: uBilly Joel